China OEM ubuso isiseko makeup ulwelo oluthengileyo isiko yabucala ileyibhile vegan isiseko sezinto zokuthambisa kunye nababoneleli | Iris Ubuhle
OEM ubuso isiseko makeup ulwelo wholesale isiko yabucala ileyibhile vegan isiseko zokuthambisa
Isiseko esikhaphukhaphu esinokhuselo oluphezulu kunye nokugqitywa kwe-matte. Ukugubungela okugcweleyo kukwasebenza ukulawula ukukhanya kunye nokukhulisa ibala lakho imini yonke. Kodwa akupheli apho: esi siseko seklasiki sifanelekile kwiintlobo zesikhumba eziqhelekileyo, ezinamafutha, ezidityanisiweyo, kunye nobuthathaka.
EXW Ixabiso: US $0.99 - 2.99/ Iqhekeza
Min.Ubungakanani boMyalelo: 3000 Iqhekeza / Iingceba
OEM . ODM : Iyafumaneka
Isiseko solwelo sinokwakheka okucolekileyo kunye nokuthambileyo, ukwandiswa okuhle, kulula ukutyhala kude, musa ukugoba, kwaye sibonelela ngokugubungela ngokupheleleyo. Iyakwazi ukugubungela ngokufanelekileyo iziphene zolusu ezifana ne-acne scars, amabala amnyama ebusweni, izangqa ezimnyama phantsi kwamehlo, ithoni yesikhumba engalinganiyo kunye ne-pores eyandisiweyo. Yenza ibala liqaqambe kwaye lilunge ngakumbi, ukwenza ulusu lubonakale lwendalo ngokupheleleyo.
Isiseko solwelo sinomsebenzi wokuthambisa kunye nokuvalwa kwamanzi. Iqulethe izithako ezimhlophe kunye nokuthambisa kunye nokulungisa ukukhusela ulusu, ukugubungela imigca emihle kunye nemibimbi, kwaye wenze ulusu lwakho lubonakale lugqibelele.
Ifomula ehlala ixesha elide, engenamanzi, kunye nobungqina bokubila ikuvumela ukuba ugcine izimonyo zobuhle ezihlala ixesha elide imini yonke. Ukunyamekelwa kwesiseko esilula kunokunyusa ukukhanya, kukhanyise ithoni yesikhumba kwaye yenze ulusu lube luthambile.
Igama lento Isiseko
2. IVegan / Paraben simahla / ioyile isimahla
3. Ihlala ixesha elide kwaye ayinamanzi
4. Ugutyulo olugudileyo, olugcweleyo
Ukupakishwa I-1 iipcs kwibhokisi yombala woyilo
A: Imibala yeSiseko iyonke sinemibala engama-30 oyikhethayo, kwaye sinokwenza eyakho imibala.
3.Q: Ndingayifumana njani isampuli ukujonga umgangatho wakho?
4.Q:Ngaba uyayamkela i-OEM ODM kwaye Ngaba ungasenzela uyilo?
5.Q:Ndingalindela ixesha elingakanani ukufumana isampuli?
6.Q:Kuthekani malunga nexesha eliphambili lokuvelisa ubuninzi?
7.Q:Ithini imiqathango yakho yentlawulo?
8.Q: Indlela yokuqhagamshelana nathi?
Ngaphambili: Ulwelo olusemgangathweni oluphezulu olugubungele ngokupheleleyo isiseko ileyibhile yabucala yokwakheka kwesiseko solwelo
Okulandelayo: Ihoseyile yezothambiso yolwelo lwemilebe yolwelo lwe-lipstick yabucala eyenzelwe umenzi wemilebe yendalo yevegan
isiseko ileyibhile yabucala isiko
isiseko makeup ulwelo ileyibhile yabucala
oem ubuso isiseko
Higher makeup umthengisi izithambiso akukho logo phezulu...
Ulwelo olukumgangatho ophezulu olukwisiseko esigcweleyo...